Midowga Musharixiinta ayaa ka hor yimid go’aan lagu mamnuucay in hubka lala galo garoonka… – Hagaag.com
Midowga Musharixiinta ayaa ka hor yimid go’aan lagu mamnuucay in hubka lala galo garoonka…
Posted on 4 Janaayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Midowga musharixiinta ayaa ku gacan seyray go’aankii ay dowladda Soomaaliya uga mamnuucday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho hubka marka laga reebo hubka ay wattaan madaxda sare ee dowladda Soomaaliya.
Arrintan ayey ku tilmaameen mid qalad ah oo aan la aqbali karin in qeybna hubka loo daayo kuwa kalana laga mamnuuco, iyaga oo intaa ku darray in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in ay ka laabato go’aankaa isaga ah.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku hadlayay afka midowga musharixiinta ayaa u sheegay VOA in musharixiinta u baahan yihiin xuquuq la mid ah tan madaxweyne Farmaajo maadaama uu yahay musharax u taaggan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
”Dadkii tartanka uu naga dhaxeeya oo uu ka mid yahay madaxweyne Farmaajo loo ogolaado in uu hubkiisa la galo garoonka annaga naloo diido, taasi waa nasiib darro iyo cadaalad darro’ ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Wasaarrada Amniga ayaa maalintii shalay soo saartay go’aankan hubka looga mamnuucday garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo taa u sababeysay sugida amniga garoonka.